Nzaghachi: Smart Match Intelligent Call Tracking | Martech Zone
Kpọọ ikpo okwu ọgụgụ isi, NzaghachiTap, mepụtara ihe ohuru, Egwuregwu Smart, nke na-enye ndị ọrụ ohere ịhụ uru ọnụ ahịa ndị ahịa ọ bụla na-abata ma kwuo na ọ bụ na ahịa azụmaahịa, ọbụlagodi isiokwu ahụ.
Inwe ike ịgbanye ụzọ ndu wee nye ego na oke uru abụrụlarị anyị nnukwu ọfụma. Simon Hoe, Global Head of Digital na Irughari 1st
Ngwaọrụ a na - eme ka iji data rụọ ọrụ iji bulie mkpọsa maka ndị na - azụ ahịa ụlọ na ụlọ ọrụ na - ere ahịa, yana ikwe ka ndị ụlọ ọrụ nwere ndị ahịa kpọọ kpọtụrụ kpọọ ROI.
Ruo ugbu a, iji jikọọ ego ịkpọ oku na ọrụ azụmaahịa chọrọ ndị ọrụ ịkpọtụrụ kọntaktị iji jiri aka ha nwee ụkpụrụ dị iche na sistemụ dị iche, ma ọ bụ jiri mwekota na sistemụ CRM ha, nke na-abụghị eziokwu ma ọ bụ kwe omume mgbe niile.
Smart Match bụ mpempe akwụkwọ mgbagwoju anya nke ndị na-ere ahịa. Ọbụghị naanị na ị nwere ike ịkwalite mkpọsa dabere na oku ole mkpọsa ọ bụla mepụtara, mana ị nwere ike ịhazi usoro gị dabere na ego ma ọ bụ uru emere. Ọ dị mfe iji Smart Match chọpụta ihe ndị na-eme ka ahịa ekwentị gị dị elu. Nick Ashmore, osote onye isi oche nke azụmaahịa na ResponseTap
Ugbu a n'iji Smart Match, ndị ahịa nwere ike, na ntinye ọnụ, kwupụta ire ekwentị na ahịa ọ bụla metụtara ahịa nke mere tupu oku ahụ.
Kpọọ Ntinye Akụkọ Gụnyere:
Nnata Isi Akuko - visibiliti nke mkpọsa gị na ọrụ ịre ahịa n’otu ebe. Gbanwee n'etiti Mgbasa Ozi, Channel ma ọ bụ Ọkara echiche maka nghọta nke ọrụ ahịa na-eweta oku kachasị, ego na uru.
Njikọkọ Njikọ - tulee otutu udiri ihe di iche dabere na odi iche. Chọpụta otu olu oku si enweta, ire ahịa na uru dị iche na otu usoro gaa na nke ọzọ.
Nweta ngosipụta egwuregwu Smart
Tags: mgbasa ozi mgbasa ozibing ppcịkpọ ahaNjirimara chanelfacebook mgbasa ozigoogle nrigoogle ppcNjirimara oku okunnabataegwuregwu smart